Date My Pet » 15 Kaonty Twitter Best hanaraka ny torohevitra ao Dating 2015
amin'ny Bridget Sirtonski
Last nohavaozina: Jan. 10 2021 | 4 min namaky
Eo amin'ny fiaraha-monina amin'izao fotoana izao entin'ny digitally, dia miantehitra amin'ny tena nahita ny vaovao avy amin'ny aterineto. Maro ny olona mampiasa haino aman-jery sosialy indrindra indrindra mba hifandraisana amin'ny namana sy ny fianakaviana ary ny hijanona Takela zava-mitranga eran ankehitriny, Ahoana anefa ny fahazoana toro-hevitra fifandraisana?
Twitter dia manome fahafahana ireo mpampiasa ny hizara vaovao amin'ny 140 anjara na tsy amin'ny mpanara-. Maro ny olona no nitsambikina teo amin'ny fahafahana mampiasa ny Twitter ho toy ny jery ho tsy ampy ny asany, fa ny manome toro-hevitra ho an'ireo izay liana.
Misy ny hoe mampiaraka sy ny plethora fifandraisana mpanoratra, mpamaham-bolongana sy ny manam-pahaizana manokana mampiasa Twitter ho fomba dishing avy mampiaraka torohevitra. I nanangona ny lisitry ny kaonty Twitter lehibe sasany izay Mibahan manodidina hoe mampiaraka sy ny fifandraisana toro-hevitra. Na mitady toro-hevitra mikasika ny fomba hanatsarana ny aterineto ny mombamomba mampiaraka na mitady torohevitra momba ny fomba hiatrehana ny ratsy nisaraka, ireo no natao ny kaonty Twitter anao voasarona!
Noho izany tsy misy fanampiny mitabataba, eto ny lisitry ny (amin'ny fanetren-tena hevitro) ny 15 tsara indrindra kaonty Twitter mba hanaraka raha mitady toro-hevitra mampiaraka:
Shannon dia psikology sy ny hoe mampiaraka sy ny fifandraisana mpanoratra izay vao tsy ela akory dia namoaka boky iray mihodinkodina manodidina ny fanahiana eo amin'ny hoe mampiaraka sy manolotra ny fomba fijery sy ny teknika eo tokoa ny miatrika ny fanahiana sy ny mampiaraka hiditra izao tontolo izao. Topazo maso ny Twitter Feed ny toro-hevitra hoe mampiaraka sy ny paikady lahatsoratra.
Julie dia manam-pahaizana momba ny tontolo fanaovana fikarohana ao anaty aterineto, ary matetika hoe mampiaraka Namoaka rohy ny lahatsoratra sy lahatsary momba ny fifandraisany tari-dalana. Manaraka ny Twitter Feed raha liana amin'izany ianao hianatra bebe kokoa momba ny fomba hiatrehana ny tontolon'ny aterineto mampiaraka.
Simone dia firaisana ara-nofo & fifandraisana mpitoraka bilaogy izay tackles misy sy ny foto-kevitra rehetra nomena azy. Raha mitady ny mpanoratra izay sahy miresaka momba ny foto-kevitra miainga avy any anaty aterineto mampiaraka ny fomba hividy sexy Lingerie, ho azo antoka izay hijery tsara ny Twitter Feed rohy mitondra any mitombina lahatsoratra.
Aaron Horton sy Josh Nalven; Guy Friends Podcast (TheGuyFriends)
Arona sy Josh namana roa izay hampiantrano ny podcast ity mifantoka amin'ny hoe mampiaraka, fifandraisana sy ny firaisana ara-nofo toro-hevitra. Raha ny foto-kevitra izy ireo ny hiresaka momba vonona, na inona na inona no eny fetra. Raha toa ianao ka hihaino mampiaraka mangidihidy toro-hevitra avy amin'ny roa mampihomehy, ary manao ny marina tanteraka ry zalahy, dia mijery azy ireo ao amin'ny Twitter.
Jen dia sady mpanoratra no fifandraisana manam-pahaizana, izay manolotra ny torohevitra ho an'ireo noana ny hianatra bebe kokoa momba ny mandrakizay-mampisaraka mampiaraka izao tontolo izao. Dia miresaka momba ny foto-kevitra toy ny fitandroana lavitra fifandraisana, ny fomba iray drafitra mahagaga daty voalohany, ary ny fomba hiatrehana vokany, amin'ny lohahevitra hafa maro. Horonan-taratasy ny Twitter tamin'ny alalan'ny sakafo mba hahitana rohy ho azy mampiaraka sy ny fifandraisana lahatsoratra sy toro-hevitra haingana sasany.
Aprily Braswell (AprilBraswell)
Aprily dia mampiaraka mpanazatra izay specializes amin'ny dishing avy mampiaraka torohevitra ho an'ny vehivavy ny 40. Ny hoe mampiaraka sy ny fifandraisana lahatsoratra ny tsipiriany ary ahalalan-, toy ny Twitter Feed, ka hanamarina azy avy raha mitady toro-hevitra ny mampiaraka ny vehivavy matotra.
Christan dia mampiaraka manam-pahaizana izay nanoratra ny andry ary izany no antony Single ianao. Dia miresaka momba ny foto-kevitra miainga avy amin'ny fomba hanao daty voalohany mahagaga ny tombontsoa avy amin'ny maha-mpitovo. Izy koa dia mamporisika ny Twitter mpanara-dia manao azy amin'ny alalan'ny fanekeny ny fanontaniana hoe mampiaraka. Raha manana fanontaniana mampiaraka mirehitra tianao namaly, jereo ny Twitter Feed.
Eritreritra Catalog (ThoughtCatalog)
Catalog eritreritra dia manolotra ny fitambarana mampiaraka, fifandraisana sy ny firaisana ara-nofo torohevitra lahatsoratra nosoratan'ny mpandray anjara isan-karazany maro amin'ny tranonkala. Ireo lahatsoratra ireo, ary kely foana mampihomehy racy, izany tranonkala izany (ary Twitter Feed) tanteraka ho an'ireo izay mankasitraka ny fomba marina tamin-kabibiana.
Josoa dia an-tserasera mampiaraka manam-pahaizana izay ahitana lahatsoratra maro nandritra ny taona maro mikasika ny faritra misy ny fahaizany. Koa satria izy no mpanohana any amin'ny faritra mampiaraka ny aterineto, Izy dia miresaka momba ny lohahevitra toy ny fomba hanamboarana ny ambony kalitao mailaka ny hanao izay hahatonga lafatra ny fiarahana amin'ny aterineto ny mombamomba. Josh fanazavana vaovao matetika ny kaonty Twitter amin'ny mitombina lahatsoratra, ka ho azo antoka izay hijery tsara ny fahana raha mitady toro-hevitra momba ny aterineto sasany mampiaraka.
YourTango tranonkala iray hafa izay manam-be ny hoe mampiaraka sy ny fifandraisana torohevitra lahatsoratra norafetiko araka ny ekipa lehibe ny mpanoratra. Ny lahatsoratra mandrakotra ny zavatra rehetra atỳ ambanin'ny masoandro momba ny mampiaraka faritra, ka jereo ny Twitter Feed mba hahita lahatsoratra miresaka ny zava-drehetra na inona na inona, ary ny hampiaraka.
Biby hita Solomona (thedatingtruth)
Biby dia mampiaraka manam-pahaizana izay manome toro-hevitra amin'ny fifandraisana mifanaraka lehilahy sy vehivavy, ary manome ny hevitra momba ny olana isan-karazany ny ankamaroan'ny olona mampiaraka niatrika, toy ny fomba hilaza raha toa ilay olona miaraka ny tsara ho anao ny fomba mba tsy hisarihana ny olona diso. Manaraka azy ao amin'ny Twitter ny rohy ho ny lahatsoratra sy ny fifandraisana indraindray quip.
Dan dia mpanoratra sy mpikatroka fanta-daza noho ny firaisana ara-nofo torohevitra tsanganana Savage fitiavana sy ny podcast ity Savage Lovecast, izay miresaka momba ny nentin-drazana sy ny fifandraisana nentin-drazana tsy olana. Jereo ny Twitter Feed raha mitady sasany mahatsikaiky, Ciel nefa mampiaraka ahiahinao toro-hevitra.
Erin dia mampiaraka Guru izay tsy manolotra ny toro-hevitra, fa ny mpanoratra azy manokana koa amin'ny radio, Tompon'ny maro mampiseho fa manasongadina ny fomba fijery izao tontolo izao ny mampiaraka. Ny lohahevitra oroka voalohany miainga amin'ny toro-hevitra mba niaraka tamin'ny teti-bola. Manaraka azy ao amin'ny Twitter ny rohy amin'ny lahatsary, lahatsoratra sy toro-hevitra ny fiarahana.
Antonio dia dokotera psikology sy ny fifandraisana izay manolotra torohevitra sy vahaolana ho an'ny rehetra sy ny isan-karazany ny fifandraisana Miteraka. Topazo maso ny kaonty Twitter, araka izay matetika Namoaka fifandraisana haingana paika sy ny teny nalaina sy rohy ny lahatsoratra.
Wilma dia mpitoraka blaogy mampiaraka nanatitra ny torohevitra momba ny niaraka aorian'ny fisaraham-panambadiana, mifototra mafy amin'ny zavatra niainany manokana manokana. Hitady ny kaonty Twitter raha mahaliana anao ny mamaky momba ny fahalalana momba ny hiditra ny mampiaraka farihy rehefa fisaraham-panambadiana.
Tsy fantatra Fomba mba Hahazoana ny fitiavana ny Fiainanao
Top 10 Soso-kevitra ho an'ny mahomby Dating